Tag: isticmaalka | Martech Zone
Wow, kani waa mid si dhammaystiran u dhammaystiran oo si fiican loo qaabeeyey oo ka socda BargainFox. Iyada oo la adeegsanayo tirakoob ku saabsan dhinac kasta oo ka mid ah habdhaqanka macaamiisha khadka tooska ah, waxay iftiiminaysaa waxa dhabta ah ee saamaynta ku leh sicirka beddelaadda ee boggaaga e-commerce. Dhinac kasta oo ka mid ah waayo-aragnimada ganacsiga elektaroonigga ah ayaa la siiyaa, oo ay ku jiraan naqshadeynta websaydhka, fiidiyowga, adeegsiga, xawaaraha, lacag bixinta, amniga, ka tagista, soo celinta, adeegga macaamiisha, wada sheekaysiga tooska ah, dib u eegista, markhaatiyada, ka qayb qaadashada macaamiisha, mobilada, tigidhada iyo qiimo dhimista, maraakiibta, barnaamijyada daacadnimada, warbaahinta bulshada, masuuliyadda bulshada, iyo tafaariiqda.
Toddobaadkan kaliya ayaa la iga wareystay wax ku saabsan shaqada aan u qabanno iyo dhibaatooyinka aan u aragno inay udub dhexaad u yihiin rajooyinkeena iyo dadaalka suuqgeynta macaamiisha ayaa ah inay rabaan inaysan u dhisin goobaha rajadooda iyo macaamiishooda - way dhisayaan naftooda. Ha igu khaldamin khalad, dabcan shirkaddaadu waxay rabtaa inay jeclaato boggaaga oo xitaa u isticmaasho kheyraad ahaan… laakiin waa kala sarreynta, barmaamijka, iyo
In kasta oo Internet-ka uu sii socdo oo uu jiray oo kaliya dhowr iyo toban sano, adduunku si aad ah ayuu ula socdaa sida loo abuuro khibrad macaamiil oo weyn. Isbarbar dhigyada u dhexeeya habka aad ula macaamilayso macaamiisha shaqsi ahaan iyo sida aad ula dhaqanto khadka tooska ah way iskaga mid yihiin markaad iskudayeyso inaad abuurto khibrada macaamiisha ugu dambaysa. Infographic by Monetate: Macaamiisha ayaa filaya isdhexgalka qadka tooska ah ee quseeya ee leh sumadaha. Ganacsiyo badan, awoodda lagu bixiyo
Isniin, April 16, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Lemonhead waxay soosaartay macluumaadkan weyn si loo fududeeyo habka qorshaynta, qaabeynta iyo wax u hagaajinta boggaaga Infograafiggu wuxuu kaa qaadayaa mid kasta oo ka mid ah saddexda marxaladood wuxuuna ku darayaa adeegsiga, kala sarraynta, tijaabinta, xulashada ereyga muhiimka ah iyo arrimo kale oo muhiim ah oo lagu daro. Qorshaynta, qaabaynta iyo hagaajinta degel ay fududaysay dadaallada internetka. Naqshadeynta websaydhka fudud ee fudud ee loo yaqaan 'infographic design' waa geedi socod naqshadeynta websaydhka qaab fudud oo la adeegsanayo qorshe wax ku ool ah, qaabeynta naqshadeynta iyo hirgelinta istiraatiijiyadeed. Hal xabbo
Khamiis, Juun 10, 2010 Khamiista, Oktoobar 29, 2015 Douglas Karr
Jon Arnold wuxuu qabtaa shaqo layaableh isagoo sharraxaya waxa shirkadiisu qabato, Tuitive = Isticmaalka. Waxaa jira codsiyo aan caadi ahayn oo halkaa ka jira oo aan waligood ifka u soo bixin. Codsiga waxaa laga yaabaa inuu xalliyo arrimo aad u adag, laakiin haddii qofna uusan si dhab ah u ogaan karin sida loo isticmaalo, ka tagitaanku wuu sarreeyaa iibkuna wuu adkaan doonaa. Maamulayaasha sumadeynta, maareeyayaasha wax soo saarka iyo naqshadeeyayaasha garaafka ayaa inta badan go'aamiya muuqaalka iyo dareemidda dalabka. Isticmaalku waa